Ikhokelo elula yokutshintsha i-Windows XP
Windows Ukufaka & Ukuphucula
Ikhokelo yeNyathelo ngeNtshukumo ekutshintshiseni i-Windows XP Product Key
Ayikwazi ukusebenzisa iWindows XP? Nantsi indlela yokutshintsha ukhiye wemveliso
Isizathu esiyinhloko sokuba ufuna ukutshintsha i-Windows XP ikhikhi yomkhiqizo kukuba ukhiye wakho uphethiweyo okanye ngenye indlela kodwa awufuni ukubuyisela iWindows XP ukuze usebenze ukhiye wakho womkhiqizo omtsha.
Qaphela: Senze lesi sinyathelo ngesinqanaba lesinyathelo ngokungezelela kwindlela yethu yokuqala Ukutshintsha i-Windows XP Product Key Code guide. Kukho amanyathelo athile ngokukodwa kule nkqubo, ezininzi zazo zibandakanya ukuhlela iRejista ye-Windows , ngoko ke lo mboniso obonakalayo kufuneka uncede ukucima ukudideka.
Ukutshintsha i-Windows XP ikhi yomkhiqizo kufuneka kukuthathe ngaphantsi kwemizuzu engama-15.
Vula Imenyu Yokuqala
Windows XP Qala Imenyu.
Into yokuqala ofuna ukuyenza kukucofa kwiQala uze ugijime ukuvula i-Windows XP Start Menu.
Vula iRejista yoMhleli
Ngoku ukuba isicelo sokusebenza sivulekile, thayipha i- regedit uze uklikhaze iqhosha le- OK .
Umyalelo we- regedit uza kuvula isicelo seRegistry Editor, esetyenziswe ukuhlela iRejista ye-Windows . Kaninzi "
Jonga kwi-WPAEvents Registry Subkey
I-Registry Editor - WPAEvents Subkey.
Kubalulekile: Kucelwa uqaphele ukuba utshintsho kwiRejista ye-Windows lwenziwa ngamanyathelo azayo. Yinyamekela ekwenzeni kuphela utshintsho oluchazwe. Sincoma ukuba uphinde uphakamise izitshixo zobhaliso oziguqula kula ma nyathelo njengolukhuseleko olongezelelweyo.
Okokuqala, thola ifolda ye HKEY_LOCAL_MACHINE phantsi kwekhompyutheni yam kwaye cofa uphawu lwe (+) olulandelayo kwigama lefowuni ukwandisa ifolda.
Qhubeka ukwandisa amafolda uze ufinyelele oku kubalulekileyo kwirejista :
HKEY_LOCAL_MACHINE \_ Software \_ Microsoft \_ WindowsNT \_ I-Current Version \_ WPAEvents
Cofa kwifayile yeWPAEvents kanye.
Cofa ukuguqula ixabiso le-OOBETimer Registry Value
Umhleli weRejista - OOBETimer Shintsha.
Kwiziphumo ezibonakala efestile ngakwesokudla, fumana i- OOBETimer .
Ukucofa kwesokudla okanye thintela-kwaye ubambe ekungeneni kwe- OOBETimer uze uqhosha Uguqula kwimenyu ehla.
Khetha Icandelo lexabiso le-OOBETimer
I-Registry Editor - Hlela ixabiso leBhanari.
Iskrini omele uyibone ngoku yi window ye- Binary Value Value kunye ne- OOBETimer kwi "Igama loxabiso ".
Njengengxenye yenkqubo yokutshintsha i-Windows XP yecandelo lomkhiqizo , kuya kufuneka ucime i-Windows XP. Ukukhubaza i-Windows XP kufezwa ngokutshintsha ixabiso le- OOBETimer , into oza kuyenza.
Khetha nayiphi na inxenye yexabiso le- OOBETimer ngokuchofoza kabini kuyo (okanye ukuphinda kabini).
Qaphela: Siphutha iindidi zehexadecimal kwi- OOBETimer kule ndawo nakwezinye izikrini kodwa uza kubona iibalo kunye neenombolo kwikhompyutha yakho.
Shintsha i-OOBETimer Value
I-Registry Editor - Shintsha i-OOBETimer Value.
Faka nayiphi na ixabiso oyifunayo ngokukhetha ukwenzile kwisinyathelo esedlule.
Qaphela: Ixabiso le- OOBETimer lifuna nje ukutshintsha - akunandaba nokuba litshintshile. Njengoko ubona kwisicatshulwa esingentla, sitshintshe inxalenye yokuqala yexabiso ukuya kwi-11 ukusuka kwiFF.
Cofa kwi- OK iqhosha ukuqinisekisa utshintsho.
Vala iRejista yoMhleli
I-Registry Editor - Uguqule i-OOBETimer Value.
Njengoko ubona, ixabiso le- OOBETimer litshintshile.
Ngoku ungasondela kwiRegistry Editor. Senziwe ukwenza utshintsho kwi-registry.
Cofa kwiQala uze ugijime
Ngoku siza kuvula enye inkqubo ngokusebenzisa umyalelo .
Cofa kwiQala uze usebenze .
Vula iWindows XP yoNcedo lweNcedisi
Ngoku ukuba isicelo sokuvula sivulekile, thayipha umyalelo olandelayo ngokuchanekileyo:
% systemroot% \_ system32 \_ oobe \_ msoobe.exe / a
Ngoku nqakraza iqhosha le- OK .
Qaphela: Kumyalelo olapha ngasentla, isikhala kuphela esiphakathi kwe "exe" kunye "/ a". Kwakhona, zonke ii-o zincwadi - akukho zeros kumyalelo. Ukuba kunceda, khuphela kwaye unamathisele oku ngasentla kwibhokisi yencoko yencoko.
Lo myalelo uvula iWindows XP yokuSebenza kuMncedisi apho siya kutshintsha i-key XP yomkhiqizo.
Khetha Ukhetho Lokusebenza Kwefoni
IWindows Activation Wizard.
Kufuneka uqale ubone i- Let's activate window yeWindows .
Khetha u- Ewe, ndifuna ukufowunela ummeli wenkonzo yamakhasimende ukuze kusebenze inkinobho yomsakazo weWindows uze uklikha iqhosha elilandelayo .
Qaphela: Awuyi kusebenza kwi- Windows XP ngefowuni ngeli xesha. Le yindlela nje omele uyenze ngoku ukufikelela kwindawo apho ungatshintsha khona i-Windows XP.
Kubalulekile: Ukuba awuyikubona isikrini esingentla kodwa endaweni yoko ubone umyalezo ukukwazisa ukuba iWindows XP sele isetyenzisiwe, awukwazi ukutshintsha kakuhle ixabiso le- OOBETimer apho kufuneka uqale le nkqubo.
Ukuba loo nto ayisebenzi, into engavamile, kufuneka uzame ukutshintsha i-Windows XP ikhi yomkhiqizo kunye ne- Winkeyfinder , inkqubo efunyenweyo yokufumana i- key product yeefayile engenako ukutshintsha i-XP. Siyayithanda le nkqubo yobungcono kuba kungekho nto yokuyikhuphela kodwa ukuba ayikusebenzelanga, yenza i-Winkeyfinder izame.
Cofa kwiComputer Key Product
Qalisa iWindows ngefowuni yeSkrini.
Cofa kwiQhosha lokuTshintshela lomkhiqizo kwizantsi kweli festile.
Qaphela: Musa ukuzalisa nantoni kule sikrini kuba le nxalenye yenkqubo yo kusebenzisa yeWindows XP, into ongayenza okanye engenakuyenza emva kokuba ukhiye wakho womkhiqizo utshintshile.
Faka iNew Windows XP yomkhiqizo
Ukungena kweNkcazo ebalulekileyo.
Fumana i-Windows XP yakho yokhiye yomkhiqizo ovumelekileyo uze uyifake apha.
Emva kokungena kumkhiqizo, cofa iqhosha lokuHlaziya .
Qaphela: Imveliso ebalulekileyo kwiskrini-skrini ngasentla ayikho isixhobo somkhiqizo weWindows XP esisebenzayo. Inikwe umzekelo kuphela.
Lindani Ngoxa i-ID entsha yokuFakela iValiswa
Ukuveliswa kweNgcaciso entsha yeNgcaciso.
Emva kokuhlaziya iqhosha lakho lomkhiqizo weWindows XP, iWindows XP yokuSebenza iWebhu iya kuvelisa iNcwadana yokuFakela entsha eya kusetyenziselwa ukwenza iWindows XP.
Esi sikrini sinokubonakaliswa okwesikhashana. Ukuba awuyikubona, ungakhathazeki. Mhlawumbi kwenzeka nje ngokukhawuleza ukuphawula.
Qalisa kwakhona i-Windows XP
Yenza iWindows ngefowuni.
Ngoku ukuba iqhosha lakho lemveliso litshintshile, uya kufuneka uphinde wenze iWindows XP kwakhona.
Kufuneka uqale ubone i- Activate Windows ngefowuni yesikrini. Le yindlela enye yokuqalisa iWindows enokumkeleka ukuyisebenzisa.
Ukuba ucofa iqhosha lase- Back , uya kubona ukuba unokhetho lokusebenza kwi-intanethi - indlela elula kwaye ekhawulezayo yokuqalisa iWindows XP ngokucinga ukuba unxibelelwano lwe-intanethi kwikhompyutheni.
Ukuba ufuna ukuyeka ukwenza i-Windows XP isebenze emva komhla wokugqibela, unqakraza uNdikhumbuze inkomfa kamva kule festile okanye ukhethe u- Awu, undikhumbuze ukuba usebenze iWindows nganye kwiintsuku ezimbalwa kwiqhosha lokusebenza eliphambili.
Qinisekisa kwakhona Ukusebenza kwakhona kwe-Windows XP
Ukuqinisekiswa kokuqalisa kwe-Windows XP.
Emva kokuqalisa iWindows XP, unokuqinisekisa ukuba ukusebenza kuphumelele ngokuphinda Isinyathelo 8 kwaye isinyathelo 9.
Iwindow ye- Windows Product Activation window ebonakalayo kwindawo yeSigaba 10 kufuneka ithi "iWindows sele isetyenziswe.
Indlela yokufumana iimveliso zeMveliso kunye neNombolo yeNombolo usebenzisa i-keyfinder
Indlela Yokucoca Ukufaka iWindows 8 okanye 8.1
Ndingayifaka njani iMemori (RAM) kwikhompyutha?
Indlela yokufumana iimveliso zeMveliso ze-MS Office Versions Versions
Indlela yokufaka iWindows 8 okanye 8.1 KwiDivayisi ye-USB
Indlela Yokufumana I-Windows Update's Anniversary Update kunye Nento Oyenzayo Okulandelayo
Ukufaka i-AGP Graphics Card
Indlela yokufumana iMicrosoft Office yakho ye-Microsoft okanye i-2013 Key Key
Ndingayilanda phi iWindows Vista?
Indlela yokuvumelanisa iWindows Live Hotmail kwiMozilla Thunderbird
Ukusebenzisana neFUB ye-Microsoft Publisher's PUB Format
I-Western Digital Caviar Green WD20EARS 2TB I-SATA Hard Drive
Yintoni iFayili yeM4V?
Thenga i-Android entsha ye-Android ngoku okanye ulinde?
Yintoni eyenziwa yi-BlackBerry Enterprise Server?
Yintoni iFayile yeFayile?
I-Easy Fix ye-Problem Tracking Problem Challenge
I-8 Best Best Gaming Accessories ukuthenga ngo-2018
Yintoni iFayile ye-BRL?
I-Bitcoin Amachibi okuMbiwa: Indlela yokufumana nokujoyina enye
Iimpawu ezixhasayo ze-YouTube omele uzilandele
I-Wigglytuff - I-Pokemon # 40
I-Monster iCarPlay Ukuhlaziywa kwe-iPhone ye-iPhone engenazintambo
I-Sims Resurrect kwi-Sims 3
Abaqhubi abaPhezulu boBulungiseleli be-2015
Thumela Ubuntu 1.19 - I-Outlook ye-Outlook ye-imeyli ye-Outlook
Fumana i-akhawunti ye-AOL ye-imeyile kunye ne-Outlook
Iifayile zeefayile ze-MIME
Yintoni iRadio yeSatellite?
Iyintoni Inkunkuma Yombane?